Sidee Si aad xididka Mobile Device inay basaasaan Whatsapp, Viber, Facebook, Skype, Line, BBM On Android
Waxaan / basaasaan Whatsapp, Viber, Facebook, Skype
Qalab xididka ee telefoonada Android.
Waa inaad toosi helaan SuperUser u exactspy, when installing exactspy (Service System) on Target Phone.
Sidee Si aad xididka Mobile Device inay basaasaan Whatsapp, Viber, Facebook, Skype, Line, BBM On Android with exactspy
II / Sida loo ogaado aan telefoonka ayaa xididka ama ma?
Tani waa su'aal guud oo aan ka maqalno waalidka iyo shaqo kuwaas oo doonaya ku daray shaqeynta la leenahay software oo ay Android. Inta badan, ma jiraan warar sheegaya muuqata in qalab Android ayaa heli xididka. Ma jiraan wax nalalka bilig, sumadaha jirin meel kasta, wax ay noo sheeg ama aan Android ah ayaa heli kara xidid.
In duruufaha xaq u, telefoonka ah Android waa la rujin laga yaabaa in ku saabsan 15 daqiiqo. Haddii aad siin telefoonka ah Android inay ilmaha ama shaqaale si ay u isticmaalaan, ay ka rujin laga yaabaa in qalabka ay ku maamulaan barnaamijka sheeegateen oo qaar ka mid ah. Malaha telefoonka la dayaco in muddo ah oo aad kaliya ma oga haddii qof rujin qalab adiga oo aan og.
Laga yaabaa inaadan ogayn sida inay u sheegaan haddii ay telefoonka ah Android weli rujin. In this article, waxaan kuu sheegi doonaa sida loo hubiyo in ama aan qalab Android aad ayaa heli xididka.
III / Sidaas, aanu Android ay helaan xididka?
1/ Hubi codsiyada
In geeddi-socodka ah ee soo afjarno Android ka, arji la yidhaahdo "SuperUser" ama "SU" badanaa waa (laakiin mar walba ma aha) rakibay. Tani waa barnaamijka oo go'aamin doona haddii qaar amarrada "superuser" waxaa loo ogol yahay in la isticmaalo. Haddii aad aragto barnaamij superuser rakiban, ka dibna waxa ay u badan tahay waa la rujin.
2/ Isticmaalka app hubiyaa xididka on Google Play
Haddii aadan weli hubin, waxaad u baahan doontaa in aad isticmaasho app ah si loo xaqiijiyo haddii ay telefoonka ayaa heli xididka. Root saxe aasaasiga ah waa app ah oo xor ka ah suuqa Store Play ama app in kuu sheegi doonaan in ama aan telefoonka ayaa heli xididka.
IV / Waxaad doonaysaa in qalab xididka inay basaasaan Whatsapp, Viber, Facebook, Skype
Waxaad macluumaad dheeraad ah si ay u qalab xididka shir XDA ka heli kartaa
ama forum stackexchange android